Moa ve ny serivisy SEO mora vidiana ho an'ny orinasa madinika?
Raha ny "vidin'ny vidin'ny SEO = loza" dia tsara kokoa noho ny fanambarana tena marina, ny tranga ratsy SEO amin'ny vidiny mora dia tsy mahazatra. Ny orinasam-barotra madinika dia afaka mifandray manokana amin'io olana io satria ireo orinasan-tseraseran'ny SEO dia matetika mikendry azy ireo sy ny orinasa ao an-toerana ary ny ankamaroan'ny tolotra omeny dia tena mahafinaritra ho an'ny trano fivarotana sy tranokala izay miezaka hampiroborobo ny niches.
Aorian'ireo vidiny ambany ireo SEO manolotra ny jamba dia mety hitarika ireto vokadratsy ireto:
Sazy noho ny Black Hat SEO. Fikambanana maro SEO izay mamotika ny torolàlana Google amin'ny teny fitenenana mipoitra, soratra miafina, varavarana ary fomba fanao ratsy hafa dia manolotra sanda ambany ho an'ny tolotra nataony - business home networking small wireless. Ity no ampahany amin'ny fandrika ataon'izy ireo: mampanantena fiovàna mahery vaika amin'ny vidiny lafo izy ireo ary manome ny fampanantenana nampanantenaina. Ny politika toy izany dia mitondra azy ireo maro tsy manana traikefa amin'ny tranonkala tsy mahatsikaritra fa ny fitomboan'ny fananana amin'ny Black Hat SEO dia tsy maharitra loatra.
Famonoana. Indraindray, ianao dia mahita ny tolotra SEO ambany ho an'ny orinasa madinika na orinasa lehibe izay tsy Black Hat. Na izany aza dia voafetra ao anatin'ny safidy fampiroboroboana izy ireo ary ny dingana rehetra dia tanterahan'ny ekipa tsy manana traikefa. Noho izany, aorian 'ny fanatratrarana teboka iray, ny fampielezan-kevitra dia manindry ao fotsiny satria ny mpikarakara ny SEO dia tsy mahafantatra hoe aiza no hiala eto. Mety tsy ho afaka hanatsara ihany koa izy ireo, toy ny vidiny ambany = karama ambany.
lanjany ny votoatiny. Ny votoaty dia milalao ampahany lehibe amin'ny teny fanalahidy fanavaozana, fananganana rohy ary fampitomboana ny fihenam-bidy. Na dia tsy manan-danja aza ny votoatinao, mahaliana na mahaliana ny mamaky, ny fampidirana ny teny sy ny rohy dia tsy hampitombo ny faktioranao. Indrisy anefa, ny kopia anisan'izany ny vidin'ny SEO ho an'ny raharaham-barotra dia mahalana dia midika fa ny fikarohana sy ny famoahana dia toy ny ekipa tsy mahazatra mahazatra an'ireo mpanoratra mpanoratra. Noho izany, aza manantena valiny goavambe avy amin'ny votoaty naloanao 10 $.
Ity fampahalalana ity dia tsy midika fa tokony hialana amin'ny "SEO" mora sy mora "mora" amin'ny vidiny rehetra. Ny tokony hataonao, dia ny fahafantaranao ny loza mety hitranga rehefa mitady ny vidin'ny SEO ho an'ny orinasanao madinika. Affordable dia tsy mitovy ny vidiny, ary ny politikan'ny vidin-tsolika dia tsy midika hoe fandikan-dalàna. Na dia misy maso ratsy aza, izay manimba ny lazan'ny orinasan'ny SEO, dia hanampy anao hahita ny tsy fitoviana.
Tsaratsara vs sandaina: inona ny fahasamihafana?
Azo atao ny mahita SEO tsara amin'ny vidiny mety amin'ny alàlan'ny serivisy mendrika. Tsy mila goury SEO ianao na manana mpanamboatra lainga. Ny fikarohana lalina dia mihoatra noho ny ampy.
Manangàna lisitr'ireo sampan-draharahan'ny SEO, izay manolotra fanampiana matihanina mendrika ho an'ny orinasa madinika amin'ny aterineto;
Ampitahao ny sarany sy ny karazam-pifandraisany atolotra azy;
Jereo ny fomba fampiroboroboana ny tenany: raha toa ka mampanantena vokatra haingana izy ireo ary mivezivezy be loatra, dia mety ho tsy misy dikany ny fampanantenany;
Jereo raha misy portfolio ny serivisy rehetra. Mialà amin'ireo orinasa tsy misy. Halalino avy eo ireo tetikasa izay niasa mba hanombanana ny fahaizan'izy ireo. Afaka mitsidika ireo tranonkala nataon'ireo sampan-draharaha ihany koa SEO ianao mba hahitanao ny fiheveran'izy ireo ny mpifaninana aminy.
Mifandraisa amin'ireo manam-pahaizana ny sampan-draharaha tsirairay ary jereo ny karazana fahatsapana asehony, na matoky azy ireo izy na tsia, na tsiambaratelo, mazava ho azy ary maika hamita ny vokatrao. Anontanio azy ireo fanontaniana izay hanambara ny fahalalany ny toro-lalana Google, ny dingan'ny fampiroboroboana sy ny teknolojia SEO. Moa ve vitan'izy ireo haingana hampanantena ny valiny ianao na hangataka bebe kokoa ny tranokalanao? Moa ve izy ireo manantitrantitra ny habetsahana sy ny valiny fohy?
Halalino ny fototra sy ny bio amin'ny orinasa. Na dia tsara kokoa aza ny serivisy manana traikefa dimy taona, aza maika hanipaka ireo orinasa 1-3 taona. Tanora tanora maro no manorina ireo manam-pahaizana izay efa niasa nandritra ny 10 taona. Ity teboka ity dia tokony hambara ihany koa ao amin'ny bio sy bilaogy ao amin'ny orinasa raha misy iray.
Jereo ny fanamarihana. Amin'ny ankapobeny, ireo orinasam-pinoana azo itokisana dia mametraka ny mombamomba azy ao amin'ny tranokalany na manana kaonty amin'ny famerenana ireo tranonkala mba hamela ireo mpampiasa handefa hafatra ary hamaly izany. Raha maso iray, izay manolotra serivisy SEO ho an'ny orinasan-tserasera madinika dia miara-miditra amin'ny fanehoan-kevitra, mety tsy ho azo antoka ny hiatrehana izany.
Amin'izao fotoana izao, ireo orinasan-tseratseran'ny SEO dia miseho amin'ny endriny samihafa ary manatona ny politikany amin'ny vidin'ny vidiny. Noho izany, raha tokony hiala avy eo amin'ireo ekipa SEO ianao, izay manolotra vahaolana sarotra, ataovy ny fikarohana ary jereo ny tena fandanjana ny vidin'ny vidiny sy ny kalitaony. Raha tsy izany dia mety ho tsy misy zavatra mahavariana mahavariana ianao!